Ica fivarotana in Liden amidy – peo ihany koa | Holmbygden.se
Ica fivarotana in Liden amidy – peo ihany koa
Posted on 20 Aprily, 2016 ny Holmbygden.se
“Ny mampalahelo ho an'ny fiaraha-monina”, toa azy ny olona raha tsy misy ny fanehoan-kevitra tao amin'ny Facebook ho Ica spool filazana ny fivarotana ny andro hafa. amin'izao fotoana izao dia manoratra Sundsvall Tidning raha ny fivarotana ankehitriny amidy. Ary toy ny hoe tsy ampy izany, ny tobin-tsolika, raha mbola mitady ihany koa amidy.
I 13 Per taona Norlander nanosika Ica Tsara Liden, fa ankehitriny Izy efa nanapa-kevitra ny hanandrana zava-baovao. Nanamarika ihany koa izy fa ny fifaninanana dia mafy amin'izao fotoana izao manohitra ny lehibe mpaninjara in Sundsvall. Ica dia nanambara ihany koa fa tsy sonia fifanarahana amin'ny tompony vaovao rehetra. Araka izany, dia hitoetra, raha mbola niady ny Per amin'ny. Per mihazona, na izany aza, amin'izao fotoana izao ny vaovao manamarina rojo izay te-haka ny tamin'olona akory mpiantoka ary manantena dia azo vita tamin'ny ny Fahalavoana.
Macken for Sale raha –
“fanairana – eo an-toerana ho fanohanana bebe kokoa”.
Toy ny hoe tsy ampy izany,, dia izao ny tobin-tsolika teny an-dalana amidy nandritra ny fotoana. ST nitafatafa Frédéric Krewski araka izay momba mba hameno amin'ny tobin-tsolika, ary manantena fa mety ho antso fanairana ho an'ny olona maro kokoa ny hisafidy ny safidy an-toerana.
Fisaorana avy HBU!
Tsy misy isalasalana fa ny fivarotana tao an-tanàna be dia nidika ho Liden distrika mandritra ny taona maro. Dia toy izany koa ho antsika “Holm”, indrindra fa nanomboka ny fivarotana tany Holm nakatona tamin'ny Novambra 2011. Holm ny distrika Development, #ShepherdsHut, te-hisaotra Per Norlander sy ny mpiasa noho ny ezaka hatramin'izao, ary manantena fa ny zavatra rehetra dia mandeha tsara raha toa ka mbola, ary izy ireo hahita vaovao mpandraharaha koa nanao izay te-haka ny. Toy izany koa, mazava ho azy Liden Macken.
23/4 -12 St.nu: naniry: Ny mpivarotra amin'ny Holm
22/6 -11 ST.nu: Ny tsena miaro ny ambanivohitra
Vakio ny Ica Liden ny hafatra etsy ambany. Tsindrio ny teny fefy ny mamaky hevitra.